Achọrọ m fend na igwe ojii m mara abụba? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Abụba ndị na-eche nche ịnyịnya ibu - olee otu ị si ekpebi
Abụba ndị na-eche nche ịnyịnya ibu - olee otu ị si ekpebi
Achọrọ m fend na igwe ojii m mara abụba?
Mudguards ma ọ bụ fenders mgbe ị nọ na America dị ukwuu mgbe ị na-agba ịnyịnya na mmiri na wintry ọnọdụ na echere m na ha dị oke mma gbasara gị ollieyeah Ekwenyeghị m na enyi m n'isiokwu a anyị ga-egosi gị ihe kpatara ha ji dị oke nke mere na ị nwere ike iji igwe kwụ otu ebe gị Ma debe ndị enyi gị ọcha na akpọọ nkụ, Aga m eme nke ahụ. Enwere m ntakịrị ihe ijuanya. Ihe ndị e kere eke n’ahịrị na-enye aka eme ka anyị na-adị ọcha ma na-akọrọ site n’igbochi taya anyị ịfesa mmiri n’okporo ámá dị n’elu anyị.
Ọdụ ahụ nwere ike inyere onye na-agba ịnyịnya nọ ọdụ n'azụ ya aka ịdị ọcha karịa tupu anyị amalite, n'agbanyeghị na ọ masịrị gị, Achọrọ m ịma ole n'ime gị na-eji fend mgbe ị na-agba ịnyịnya igwe m na-azụ n'oge oyi n'oge oyi ma ọ bụ na ọnọdụ ruru unyi megide ajọ oge oyi Ọnọdụ ma mee ka m kpoo ma dị ọcha ma dịkwa ọkụ ma ndị a bụ ngwa agha nzuzo m n'aka nke ọzọ abụ m onye ugwu ugwu siri ike nke na-achị ọchị na mmiri ozuzo na ihu igwe oyi, echeghị m na mudguards na-enyere aka nke ukwuu na anyị kwesịrị ịga n'ihu na ọnọdụ , na anyị na-anya ụgbọ, inwell ollie iche dị ka ekwere na nkwa, enwere m ihe akaebe na-egosi etu fend dị ọfụma si dị, ị dịla njikere, ị dị ka onye nzuzu, ee, ọbụghị naanị gị nwere ike ịme anwansi n'akụkụ chi dịka ọkụ ala mmụọ mee nke ahụ, ọ bụghị njem mbụ m, enyi m, nke ọma na anyị nwetara nke ahụ, enwere m obere nwa agbọghọ mara mma n'usoro ule ka m wee chee na anyị ga-aga n'ihu ma hụ etu ndị ahụ si dị, ka anyị ga-aga ? Enwere m ike ịhụ, ee, apụrụ m ịhụ, ị ​​nwere ihe niile n'okpuru gị, ee, ollie, anyị gbara obere na kedu ka isi masị gị? Taa ọ bụ naanị iji gosipụta ịdị mma nke uhwell ndị nche m ma e jiri ya tụnyere ndị nche m, ọ bụ naanị ụdị ngosipụta ọhụụ doro anya, ee, yabụ anyị agwụla obere obere njem anyị ma etinyela m onwe anyị na ụfọdụ egwu kacha njọ nke m nwere na m chere na anyị kwesịrị inyocha nsonaazụ nke nnwale anyị, ihe nsonaazụ Mod Guard emeela ka ibu dị elu karịa afọ ole na ole gara aga ma enwere ọtụtụ ọdịiche dị iche iche na usoro clip clip ndị a nke na-aga n'ụzọ ọ bụla igwe kwụ ọtọ, ọbụlagodi ndị ahụ enweghị ezigbo fenda mounts, nke ahụ bụ ihe ọma ma ezi, ma m na-ekwu na ọ ga-abụ a mpụ megide Italian ịke ka fender a igwe kwụ otu ebe otú ahụ ka m na-echeghị na ha na-adịghị ọbụna n'ihi na-eme ihe n'eziokwu fenders n'ihi na ọ pụtara na ị ga-arụ ọrụ ike karịa mụ na m nwere ike ịkwọ ụgbọala ngwa ngwa karịa gị, mana ọ bụ oge oyi n'ihi ya ọ bụ ikuku ikuku abụghị ihe niile n'ihi na anyị na-anwa ịnọrọ ọkụ na akọrọ M ga-edebekwa igwe kwụ otu ebe na akụrụngwa dị ọcha ma hichaa nke pụtara na ha ga-adị ntakịrị toro ogologo. Ekwesịrị m ime ihe n'eziokwu, enyi m, ekwenyeghị m na m na-ekwu, ee, enwere m, m ka nwere ụrọ ụrọ ole na ole na m, mana anyị na-ele otu anya, ị na-eche site na ikpere ka ị ghara onwere otu ihe ahu eji anya ahia gi huru na obu mkpari gini ka i na-ekwu na m nwetara apịtị na mgbochi m n'èzí? Materear fenders kacha dị irè, mana onye na-echekwa ihu n'ihu na-enyekwa aka mee ka ụkwụ gị na ụkwụ gị dị ọcha karị, ebe ha dị mma maka ịgba ịnyịnya mgbe ị na-agba ịnyịnya n'otu ìgwè mgbe ndị ọzọ na-agba ịnyịnya enweghị fend, ị ka ga-ntakịrị mmiri na unyi nwekwara site na ịgba site na taya, nke ahụ abụghị ihe dị mma, yabụ echere m ịza ajụjụ anyị. Ndị na-elekọta Domud na-eme ka ị dị ọcha, ee, echere m na ha na-eme ya, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịgaghị akwado ha, ọ bụrụ na ị gbalịa ịgba ọsọ ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme njem naanị gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-azụ onwe gị oge kachasị, mgbe ahụ ha na-edebe ya onwe ha na anyịnya igwe dị oke mma, ma ọ bụrụ na ị nọ n'ìgwè na ndị enyi gị etinyeghị ego na ụkpụrụ, uru ha bara ezigbo obere.
Ana m agwa gị gịnị? Echere m, m na-apụtaghị ikweta na, ma na-ahụ otú ihe gị ọcha, m n'ezie mere, Achọrọ m iji ụfọdụ apịtị flaps, ka anyị hụ ihe ị ga-esi na isiokwu a banyere nke a n'ezie, ezigbo elu tech sayensị nnwale Nọgidenụ na-ekwu na anyị ga-ama na m ga-ahụ gị na-esote ma enweghị m ike ikwenye na m dị ọcha, nke ahụ kwesịrị ọnụego mkpịsị aka
Ndị nche apịtị kwesịrị ya igwe kwụ otu ebe?
Ọ nwere ike ịbụ ngwakọta apịtị,snow, mmiri ozuzo, na ndị ọzọ na-agba ọsọ site na taya. N'ụzọ dị mma, ọ bụ ebe ahụfendersnamudguardsbata n’egwuregwu. Fọdụabụba igwe kwụ otu ebeNdị na-agba ịnyịnya enweghị ike ịga n'enweghị ha, ebe ọ na - enyere aka idebe ihe ọcha, ọkụ, na nchekwa zuru oke.
Kedu ka ị si eme fender igwe kwụ otu ebe?
N’okporo ụzọ mmiri, kama ịnagide ụrọ apịtị na-adị mgbe niile n’elu taya gị,mudguardsdebe gị - naigwe kwụ otu ebe- n'ụzọ dị ukwuu akọrọ. Ọbụna mgbe ị na-agba ịnyịnya mmiri ozuzo, ị ga-enweta ọkara dịka mmiri n'ihi na anaghị asa gị n'okpuru na nke elu. Ihe ọzọ bụ, uwe gị dị oke ọnụ na-adị ọcha (er).Ọkt 8 2017
Site ugbu a na unu niile ga-ama na site na isiokwu na GMBN anyị maara na anyị hụrụ n'anya kpam kpam mbanye anataghị ikike. Ma ọ dịghị ihe gbagwojuru a free otu. N’isiokwu a anyị ga-egosi gị otu esi eme fenda.
Ihe ndebiri a nke m na-eke ga-adị na nkọwa dị n’okpuru, ihe niile ị ga-achọ maka ya bụ karama lita abụọ. Ọ dị mma, dịkwa mma, ibudatara ndebiri gị, ugbu a, m ga-egbutu ya n'ihi na aga m achọpụta nke ahụ, rapara ya na karama ahụ ma bepụ ya niile. Ya mere, buru m mgbe nke a na-egwu egwu.
Yabụ anyị bepụrụ ndebiri anyị ma ọ bụrụ na ị chọpụtaghị na nke a ga-abụ fenda. Ọ ga-anọdụ n’okpuru ndụdụ ahụ, anyị ga-eke ya agbụ iji jide n’aka na ọ nwere nchekwa. Ihe ga - eme bụ na ọ ga - eme ka apịtị ghara ịbata site na okpueze, gbagoo ma maa gị ụra n’ihu.
Mana ọ na-aga nzọụkwụ na-esote na nke ahụ na-akwadebe karama ahụ. Ọ dị mma, ugbu a banyere karama a. O doro anya na ị ga-achọ karama lita abụọ nke mara mma Indian dị ka nke a.
Na ihe anyị ga-eme, kwụpụ otu ga-ebipụ ya n’elu. Anyị ga-eji mma, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mma, kpachara anya na m ga-ebipụ mkpịsị aka gị. Anyị ga-ebipụkwa akụkụ ala ahụ ka anyị wee ga-egbutu ya na ọkara tupu anyị etinye template ahụ n'elu ya, ọ dị mma, yabụ, m bepụrụ akụkụ ahụ elu wee belata ya okpuru.
Ugbu a, m na-egbutu ya na ọkara ka m wee nwee ogologo, mpempe akwụkwọ. M na a na-aga na-etinye m stencil n'elu ya dá »‹ kwa mma n'ihi ya, m na-agbapá »open ghaa karama m ugbu a, zuru oke enwe ya. Aga m anwa ime ka nke ahụ dị ntakịrị.
Ọ bụ a mara mma stiif ihe. Anyị ga - enweta stencil anyị, tinye ya na ya ma anyị ga - enweta nkọ, akara aka na - adịgide adịgide ihe ọ bụla ịchọrọ, na anyị ga - achọpụta nke ahụ ka anyị nwee ike belata ya na plastik ahụ. Ọ dị mma, a na-ahazi isi ihe ndị ahụ.
Bloomingdale igwe kwụ otu ebe
Wepụ ya ọzọ. Lelee ihe mkpuchi ihu m ga-abụ. Anyị ga-ebipụ nke ahụ ugbu a.
Anyị na-n'ezie maa e. Nwere ike ịhụ ọdịdị nke nbanye nke ọma. Ihe m ga - eme bu iwepu ufodu ihe di nkọ were mechie ha.
Ọ dị mma, ugbu a ị na-eche otú ọ dị? Actually chọrọ n’ezie ịgba ịnyịnya ígwè? Ọfọn, ị ga - eji zipties anọ, ọ bụ ebe a ka ntụmadị anyị na - abata. Yabụ ka anyị kụọ ụfọdụ oghere na fenda ahụ ka anyị wee nwee ike itinye ya na igwe kwụ otu ebe. Ọ dị mma, yabụ na ịchọrọ mkpaji anọ na oghere asatọ na fenda ahụ.
Aga m eji ntụpọ oghere maka nke a, ọ na - eme ya ka ọ bụrụ ihe nhicha dacha ọcha, kpachara anya mgbe ị na - eme ya, ma ọ bụ mma ahụ, mana ọ naghị enye gị oghere dị mma. O yikarịrị ka ị ga-ahụ onwe gị ka ị dọkaa karama ahụ n'otu oge, yabụ ụzọ kachasị mma bụ ime ka ihe mkpuchi ahụ dị ntakịrị. Na na na, eleghị anya ị gaghị ahụ ya, ma ugbu a, m na-poked niile oghere na fenda onwe ya.
Aga m agbanye eriri njikọ na nke siri ike, mgbe ahụ anyị ga-atụgide ya na igwe kwụ otu ebe. Ọ dị mma, dịkwa mma, yabụ ugbu a bụ oge iji tinye ya na igwe kwụ otu ebe. You're na-aga ịtinye ya n'okpuru ndụdụ ahụ, zip zip zip, wee soro otu n'otu, achọrọ m ịmalite na okpueze.
Ngwa, ka anyi jee. Ọ gbakọtara. Ugbu a naanị ihe fọdụrụ ime bụ iwepụ ọdụ ndị ahụ na njikọ zip.
Ya mere, dị nnọọ jidere gị USB ịkwa osisi, lezienụ maka stanchions. Ga-ebipụkwa ha. N'ezie, ugbu a na fenda dị na igwe kwụ otu ebe, enwere ọtụtụ mgbanwe ị nwere ike ime.
vaast anyịnya igwe
Nwere ike itinye ụfọdụ akwụkwọ mmado, ị nwere ike iji plastik mee ụcha dị iche iche, ma ọ bụ ị nwere ike ịse ya. Nwere ike ịgba ya, mee ụfọdụ imewe, mee ihe ọ bụla ịchọrọ. Now nwere fenda gị ugbu a.
Aga m etinye ihe mmado a, nke ahụ ga-abụ njedebe ikpeazụ m. Aga m eme nke ahụ mma. Nke a bụ otu esi eme ya.
Esi mee fenda, maka na-esote ihe ọ bụla. Ikekwe ị nwere karama lita abụọ dina n'ụlọ, mkpa, mkpọchi mkpọchi. Nwụrụ Anwụ dị mfe ime o ọ ga-azọpụta ihu gị ọtụtụ oge.
Ga-enwe ekele maka ya ozugbo ị nwetara ya n'okporo ụzọ. Ọ bụrụ n’ịchọ ịhụ akụkọ ndị ọzọ sitere na GMBN wee pịa ụwa a ka ịdenye aha n’ihi na ịgaghị agha ọzọ. Pịa ebe ahụ maka Home Maintenance Hacks, pịa ala ebe maka Pre-Ride Hacks.
Echefula ma ọ bụrụ na ịchọta nke a bara uru n'ezie wee kwuo n'okpuru ebe a, nye ya mkpịsị aka dị ka, ma kesaa ya. Nwee anụrị, lee gị.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè zuru ụwa ọnụ?
Igwe eji agba igwebya abụru ngwa-ọgu. Ọ bụghị naanị na ha dị iche iche dabere na ịdọ aka ná ntị gị naigwe kwụ otu ebeụdị, ụfọdụanyịnya igwenwere ike ịbụ dakọtara na set nkefendersma ọlị.Eprel 10 2017
Ndị nche apịtị na-enyere MTB aka n'ezie?
Mudguardsnwere ike ọ gaghị abụ ngwa ngwa kachasị nwee mmekọahụ, mana nke bụ eziokwu bụ na ha na-eweta nnukwu uru maka obere ibu ma ọ bụ ụgwọ. Ha nwere iken'eziemee ka arụmọrụ gị dịkwuo mma, naanị site n'ime ka ị na-acha, na-ekpo ọkụ ma nwee ntụsara ahụ - ị nwere ike ịnya ma zụọ ogologo ma sie ike mgbe ị naghị etinye mmiri, oyi na nhụsianya.Mar 1 2016
Ego ole ka mudguards na-ebelata gị?
Eme nnyocha mechara kwubie na e nwere n'ezie otu chọpụtara ezigbo ọnụ na ikpuru ọnụọgụ - na igwe kwụ otu ebe namudguardsnwere 4.6%, 4.5% na 4.6% obere dọrọ karịa bike enweghịmudguardsna 6 m / s, 8 m / s na 10 m / s n'otu n'otu.Ọkt 31 2019
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ọ bara uru?
Fandụlmee nnukwu ihe dị iche mgbe ị na-agba ụzọ ndị mmiri na-ezo, mmiri ozuzo na-adịbeghị anya, ma ọ bụ snowmelt. N'ime mmiri ozuzo siri ike, mmiri nwere ike izo site na mmiri dị ọcha site n'elu, manafendersga-echebe gị ahu naigwen’apịtị na aja si n’apịtị na apịtị na-asọpụ.
Achọrọ m fend na igwe kwụ otu ebe m?
Gịkwesịrịeleghị anya tụlee itinyefendersnke giigwe kwụ otu ebema ọ bụrụ na:
Naghị eme atụmatụ iburu mgbanwe akpụkpọ ụkwụ, sọks na uwe ogologo ọkpa. Na-aga otu ịnyịnya n'okporo ụzọ mmiri (fendersgbochie onye na-agba gị n'azụ ka ị ghara iri unyi… n'ụzọ nkịtị).08.05.2012
Achọrọ m fend na ugwu igwe m?
Gịkwesịrịeleghị anya tụlee na-agbakwunyefendersnke giigwe kwụ otu ebema ọ bụrụ na:
Naghị eme atụmatụ iburu mgbanwe akpụkpọ ụkwụ, sọks na uwe ogologo ọkpa. Na-aga otu ịnyịnya n'okporo ụzọ mmiri (fendersgbochie onye na-agba gị n'azụ ka ị ghara iri unyi… n'ụzọ nkịtị).Ọnwa Ise 8, 2012
Kedu ihe bụ crud catcher?
NaOnye na-eme ihebụ ngwaahịa dị ịrịba ama maka ịgba ịnyịnya ígwè ugwu na UK ma ugbu a ọ nọ na nke itoolu ya, yana na oke ọnụ ahịa dịkwa oke ọnụ. Mgbasa ozi. Omumaonye nwuchiattaches mfe gị ala tube na a ụzọ roba O-yiri mgbaaka.24 nke 2010 r.
Kedu nke kachasị mma mud muds maka igwe kwụ otu ebe?
Kemgbe 2008, Portland Design Works na -emepụta ngwaahịa maka ndị na-agba ígwè kwa ụbọchị. Ngwaahịa ndị a sitere na ngwụcha karama na ọkụ igwe kwụ otu ebe dị na ntuziaka a. Dịka ngwaahịa Origami ndị dị n'elu, Mud Shovel 6.5 dị na nhọrọ ihu na azụ. Agbanyeghị, emebere ngwakọ ngwaahịa a maka igwe kwụ otu ebe.
Ebee ka itinye Fender na igwe abụba?
Ọ kwekọrọ na ọdịdị kachasị nke ụfọdụ ịnyịnya ígwè mara abụba, ndị mmadụ na-enwekwa mmasị ịnwe ihe ha nwere ike ịdabere na oge ọ bụla ha na-agba ịnyịnya. Nwụnye bụ ikuku, ka fenda ihu na-aga n'ihu oche oche, ebe azụ na-aga n'ihu na ndụdụ azụ.
Ebee ka ndị nche na-aga ịnyịnya igwe mara abụba?
Ntinye dị mfe, dịka onye nche na-arapara n'elu na n'akụkụ nke ndụdụ ahụ. Mgbe echichi, ọ nwere ike ichedo ma isiike na nkwusioru abụba. Ọ dịghị mkpa maka ngwaọrụ ọ bụla agbakwunyere, nke dị mma maka ndị na-achọ iji ya mgbe ụfọdụ.